Medical Abidan (ဆေးအဘိဓာန်) APK Download for Android - APK MOD
Home » Apps » Medical » Medical Abidan (ဆေးအဘိဓာန်)
ကျန်းမာရေးဆိုတာ အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ သင်က သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုနားမလည်လို့ စိတ်ပျက်ခဲ့ဖူးသလား။ သို့မဟုတ်ရင် သင်သောက်နေတဲ့ဆေးထဲ ဘာတွေပါလဲမသိတာ၊ သင့်ကိုပေးတဲ့ကုသမှုတွေက ဘာတွေလဲမသိတာမျိုး ကောဖြစ်ဖူးသလား။ ဒီပြဿနာမျိုးတွေကို ဖြေရှင်းပြီး သင့်ကျန်းမာရေးအသိကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပထမဆုံး app လေးတစ်ခုလာပါပြီ။
Medical Abidan ဆိုတာက မြန်မာဘာသာနဲ့ရရှိပြီး အလွန်သုံးရလွယ်ကူတဲ့ ပထမဆုံးသော ကျန်းမာရေး အဘိဓာန် app လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ဆေးပညာစာလုံးပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒေတာဘေ့စ်ကို နောက်ထပ် စာလုံးအသစ်အသစ်တွေနဲ့လည်း ပေါင်းထည့်ပေးသွားဖို့ ကြိုးစားနေပါတဘ်။
ဒီ app ကို ဆေးကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေ၊ သူနာပြု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ပညာရှင်အားလုံးဆီကို ရောက်ရှိဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆေးလောကထဲကလူတွေကြည့်ပဲသုံးဖို့ရန် အတွက်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဆေးပညာကိုလေ့လာလိုသူ အရပ်ဘက်ပြည်သူအားလုံး ဒီ app ကို အခမဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူသုံးနိုင်ပါတယ်။
Medical Abidan app လေးရဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်းကိုအသေအချာ ပြင်ဆင်ဖန်တီးထားမို့လို့ အသုံးပြုသူအပေါင်း စိတ်ကျေနပ်မှုအမြင့်ဆုံးရရှိစေမှာပါ။
Health isacommon issue for everyone. Have you ever felt upset because you don’t understand what your doctor says? Otherwise, are you receiving treatment and taking drugs without knowing what’s inside them? In order to solve these problems, we are ready to deliver our first tool to improve your health literacy.
Medical Abidan app is the first and most easy to use health dictionary available in the Burmese language. This dictionary provides translations of more than 7000 medical terms. We are trying to update the database with more and more words. We aim this app to reach to medical students, nurses, paramedical students, and healthcare professionals. But it’s not only limited to the people in the medical field, everyone who is keen to learn medicine can use the app freely. The design and functionality of the app are carefully crafted so that users can have the highest satisfaction.
Hỏi Ngu 2020 – Hoi Ngu 100.000 Cau Hoi